. မြ ရဲ့ သင်ပုန်း ၀၁-၇-၂၀၁၅ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
My Dear Diary » . မြ ရဲ့ သင်ပုန်း ၀၁-၇-၂၀၁၅	11
. မြ ရဲ့ သင်ပုန်း ၀၁-၇-၂၀၁၅
Posted by မြစပဲရိုး on Jul 1, 2015 in My Dear Diary | 11 comments
. မြ တစ်ယောက် ခေါင်းကုတ်နေသည်။
ဝိုင်တူးကေ လို ခုနှစ် အချိန် အပြောင်း က ခြိမ်းခြောက်မှုမျိုး ကြားပြန်လို့ ဖြစ်သည်။
ဒီနေ့ ဇွန်လ ၃၀ရက် သည် ၃နှစ်ကာလ အတွင်း နေ့တာအရှည်ဆုံး ဖြစ်ပြီး သန်းခေါင်အရောက် တွင် တစ်စက္ကန့် ပို သွားမည် ဟု သတင်းများ တွင်ဖတ်ရသည်။
. နေရှင်နယ်ဂျီအိုဂရပ်ဖစ် ဆိုက် ထဲ မှာတော့ “World Will GainaLeap Second on Tuesday:” လို့ ဆိုသည်။
အဲဒီ တစ်စက္ကန့် အပို ရလိုက်မှာ အတွက် ဘယ်လို အသုံးချမလဲ မေးသူမေး ကြသည်။
. မြလဲ မပြောတတ်။
သို့သော် ဗြီတိသျှ ထုတ် တယ်လီဂရမ်သတင်းစာကြီး ထဲ တွင်မူ ကား ဤသို့မဟုတ်။
ကွန်ပျူတာစနစ်များ ကို့ယိုးကားယား ဖြစ်သွားချိန် စတော့ရှယ်မားကက်များ နှင့် လေယာဉ်လိုင်း များတွင် ဗရုတ်သုတ်ခ ဖြစ်သွား နိုင်သည် ဟု ဆိုသည်။
ဟုတ်မဟုတ်တော့ မသိ၊ တစ်ချို့ နေရာများမှာ သန်းခေါင်ကျော်ပြီးချိန် ဘာမှတော့ မဖြစ်သေး။ ကမ္ဘာ့အရှေ့ခြမ်း တစ်ခြမ်းလုံး ကတော့ သိလိုက်ဟန်မတူလားမသိချေ။
တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ဒီနေ့ဘဲ ရန်ကုန် မှ ဆီအားတဲ သို့ ပြန်သော သူငယ်ချင်း ကို ပြေးမြင်သည်။
. နှစ်ထောင် ခုနှစ် သန်းခေါင်ချိန်မှာလဲ သူငယ်ချင်း တစ်ယောက် အင်္ဂလိပ်တိုင်းပြည် အသွားလေယာဉ်ပေါ် ရောက်နေခဲ့သည်။
. ဈေးသက်သာသည့် အပြင် လေယာဉ်ပေါ် လူ မရှိသလောက် နဲ နေခဲ့ သည် ဆိုသည်။
ထို သူငယ်ချင်း နှစ်ယောက်စလုံးမှာ ကွန်ပျူတာ ပရိုဂရမ်မာ များ ဖြစ်ကြသည်။
ထို့ကြောင့် ပရိုဂရမ် / Software အမှား Bug ဘဂ်ပေါင်း များစွာ ကို ယဉ်ပါးနေ၍ အကြောက်အလန့် မရှိခြင်းဖြစ်မည်။
. ပြောရလျှင် ကမ္ဘာကြီး သည် တစ်ခုခု မှားယွင်းလာသည် ဟု ထင်မိသည်။
သို့သော် “ယနေ့ ကမ္ဘာကြီး သည် အရင်ကာလ များ ထက် ပိုပြီး ငြိမ်းချမ်းလာသည်၊ လူသတ်ဖြတ်မှု အနိုင်ကျင့်မှု များ ပိုမို နဲပါးလာသည်”
ဆိုသည့် Research စာတမ်း အကြောင်း ကြားလိုက် သော် ………………..
. မြ ခေါင်းကုတ် လိုက်ပြန်သည်။
လမ်းဘေး က နှင်းဆီ
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: အချို့ ကိစ္စတွေက တစ်ယောက်ယောက် က ဆရာကြီးပေါက်နဲ့ ထ အော်လိုက်တာကို
ကျနော်ကတော့ ကိုယ့်အာရုံနဲ့ကိုယ်ဆိုတော့ ကိုလတ်ကြီးပြောတဲ့ ဒီသတင်းကို ဖတ်လဲမ မဖတ်မိ
သိလဲ မသိလိုက်တော့ ဘာမှ စိတ်ထဲမှာမရှိ
ည သန်းခေါင်ကျော်အထိ ရေးလိုက်ဖတ်လိုက်နဲ့ အလုပ်တွေရှုပ်နေခဲ့တာလေ
မျက်ကန်း တစ္တေမကြောက်ဆိုတာ ဒါပါဘဲ။
ဆက်စပ်ပြောရရင် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံရေး အခြေအနေက အခုအတိုင်းပါဘဲ
သိသူတွေ တတ်သူတွေက အရမ်းကို စိုးရိမ်ပူပန်ကြ၊ီးနေကြပေမယ့်
ဘာမှ မသိသူတွေက တော့ အေးဆေး နေ နိုင်သလိုပေါ့
Courage says: ငင့် အဲ့အကြောင်းသိတောင်မသိလိုက်ဘူး
တစ်စက္ကန့်ပိုတာကောင်းတယ်မယ်ဗျ။ အချိန်ပိုပြီး အိပ်လို့ရတယ်လေ
Alinsett @ Maung Thura says: ညတညမှာ တစက္ကန့်သာ ပိုရရင်
အခုတလော အိပ်ရေးရယ် မဝရေးချ မဝချင်
kai says: ကမ္ဘာကြီးပိုကောင်းလာသပေါ့…
အရင်အနှစ်၃၀ကဆို.. ရန်ကုန်မြို့ပတ်ရထားများ.. ညတိုင်းတိုင်တဲ့မုဒိန်းမှုတောင်နေ့တိုင်းရှိသဗျ…။
ခုနေခေတ်မှာ… ယူအ်က်စ်မှာ အခုဖြစ်.. အခုရန်ကုန်ကလူကသိ…။
ပြောကြတာတော့.. ..လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်၂၀က ယူအက်စ်သမ္မတရတဲ့သတင်းအချက်အလက်မျိုး.. အမေရိကန်တိုင်းလိုလိုရနေကြပြီဆိုတာပဲ..။
အရင်တုံးက.. ပိုပိုဖြစ်နေကြတာ.. လူသာမာန်တွေမသိတဲ့သဘော.. မသိတဲ့သဘော…။
Ma Ma says: စက္ကန့်ပိုင်းလောက်ဆိုတာကို ဘာမှမထိရောက်ဘူးလို့ စိတ်ထဲထင်မိပေမယ့်…
ဒဂုံစင်တာကပြန်အထွက် တဖက်ကားလမ်းပေါ်အရောက် ဗုံးပေါက်ခဲ့လို့ သူ့ရဲ့ကံကောင်းပုံကို သတိရမိသွားတယ်။။
ဖြစ်ချင်ရင် မိနစ်ပိုင်း စက္ကန့်ပိုင်းကလည်း အပြောင်းအလဲအများကြီးဖြစ်သွားနိုင်တယ်။
မိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပု says: 95
ဦးကျောက်ခဲ says: အာ ဟ … တောပုန်းကြီး ကပု… ဘယ်ချောင်ကထွက်လာတာတုန်း…
မကြာမကြာ ရွာထဲပြန်လာပါဗျ … ခင်ဗျားမရှိတော့လည်း ပျင်းသား… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14466
kai says: …. အူကြောင်ကြောင်ဖြစ်မိ…
မြစပဲရိုး says: . ပေါ်လာဝမ်းသာလှပါဘိ တော့ ဘပုလေး ရယ်။
ဘယ်တွေသွားပြီး ရန်ဖြစ် နေတုန်း။
95 က Windows လား။
Out of Date ….. lol:-)))))
Mike says: .မြစာကလေးရဲ့ ပို့စ်ကိုဝင်ဖတ်မိတော့ ပျောက်နေသူ ဆာယေးစရာဂျီး ကိုအောင်ပုကိုတွေ့ရသကိုး
.မြ လိုပဲ ကြီးမိုက်လည်း ခေါင်းကုတ် ဖတ်သွားပါသီ
မြစပဲရိုး says: အားလုံး ကို ကျေးဇူးပါ။
. ရှေ့ကို သာ အတင်းတက်ဖို့ လုပ်နေသူမို့ နောက်ကြောင်းပြန် ရီပလိုင်း မလုပ်နိုင်တာ ခွေးလွှတ်ကြပါ။
မှတ်ချက်မပေးဘဲ ဒီတိုင်းဖတ်သွားကြရင်လဲ ရပါတယ်လို့စ်။
တစ်ယောက်ချင်း စကား မပြန်နိုင်တာ အားနာလို့ပါ။
ဟန်ဒရက်သောင်ဇင် ပြည့်ပြီး ရင် မှတ်ချက် တွေ ကောင်းကောင်း ပြန်ပေးပါ့မယ်လို့စ်။
ကွန်တစ် နှစ်ထပ်ကွမ်း (ကွန်ဆားဗေးတစ် + ကွန်ပဲရတစ်)
. မြ :-)))